Iikholeji zase-Ohio: Qhathanisa noMthetho oMiselweyo wokuBamkelwa
Yiyiphi UMTHETHO wemigangatho oyifunayo ukuba ungene kwelinye leekholeji ze-Ohio okanye iiyunivesiti eziphezulu? Ukuqhathaniswa kwamacandelo amanqaku kubonisa ama-50 ekhulwini abafundi ababhalisile. Uloluhlu ukuba umlinganiselo wakho ungaphezu kwe-25 percentile kodwa ngaphantsi kwe-75th percentile. Ukuba amanqaku akho awela ngaphakathi okanye ngaphezulu kwezi zigaba, ujoliswe ekujoliswe kuyo kwelinye lale kholeji ephezulu yase-Ohio .
Iikholeji ze-Ohio eziphezulu zeMatriki Umlinganiselo wokulinganisa (ephakathi kwamaphesenti ama-50)
25 percentile 75th percentile 25 percentile 75th percentile 25 percentile 75th percentile
Kwimeko yeNtshona 30 34 30 35 29 34 ubone igrafu
College of Wooster 24 30 23 32 23 29 ubone igrafu
EKenyon 29 33 30 35 27 32 ubone igrafu
IYunivesithi yaseMiami 26 31 26 32 25 30 ubone igrafu
Oberlin 29 33 30 35 27 32 ubone igrafu
Ohio Northern 23 28 21 28 23 28 ubone igrafu
Ohio State 27 31 26 33 27 32 ubone igrafu
KwiYunivesithi yaseSukuton 24 29 24 30 23 28 ubone igrafu
I-SAT version yale tafile
Izikolo zovavanyo kunye nesicelo sakho sokwamkelwa kweekholeji
Qaphela ukuba ii-ACT izikolo ziyingxenye enye yesicelo. Amagosa avunyelwe e-Ohio aya kufuna ukufumana irekhodi eliqinileyo lemfundo , isicatshulwa esiphumeleleyo , imisebenzi enentsingiselo yexesha elichanekileyo kunye neencwadana ezintle zokucebisa .
Uyabona uguquko olubanzi kwiingcingo zeekholeji ze-Ohio. Ukuba ubuphakathi kweepesenti ezingama-50 zabafakizicelo ku-Xavier okanye kwiYunivesithi yase-Dayton, uya kuba sezantsi kweepesenti ezingama-25 zabafundi ababhalise kwi-Case Western. Oku akuthethi ukuba awuyi kwamkeleka, kodwa kuthetha ukuba zonke izicelo zakho kufuneka zomelele ukuhlawula amanqaku aphantsi. Ngaphandle kweepesenti ezingama-25 zangeniswa, ngoko ke kunokwenzeka ukuba uya kuba njalo. Qaphela ukuba i- Denison ayifakwanga njengesikolo esikolweni.
Uluhlu lwamanqaku okuvavanya kwiyunivesithi nganye litshintshile kancane unyaka nonyaka kunye, nangona ludla ngokungaphantsi kwinqanaba okanye ezimbini.
Idatha engenhla ivela ngo-2015. Ukuba usondele kumanqaku adweliswe kuwo wonke umda webala, gcina loo nto.
I-25 ne-75th percentile ibonisa isigxina esiphakathi semilinganiselo yokuvavanywa kwabafaki zicelo abaye bamkelwe kwiyunivesithi. Uya kuba ngumxube oqhelekileyo wabafundi abafake isicelo eso sikolo kwaye samkelwa ukuba yiyo apho amanqaku akho awela khona.
Nazi ezinye iindlela zokujonga ezo manani.
I-25 ye-percentile ithetha ukuba amanqaku akho angcono kunekota engezantsi yalabo abamkelwe kwiyunivesithi. Nangona kunjalo, iikota zintathu zalabo bamkelekileyo bafumana amanqaku angcono kunelo nani. Ukuba ubeka amanqaku angaphantsi kwe-25 ye-percentile, ayiyi kululeka kakuhle kwisicelo sakho.
I-75th percentile ithetha ukuba amanqaku akho angaphezu kwekota-ezintathu zabanye abamkelweyo kwisikolo. Kwimizuzu enye kuphela yabamkelekileyo abanamkelekileyo ngaphezu kowelo hlobo. Ukuba ungaphaya kwe-75th percentile, oku kuya kuba nzima kakhulu kwisicelo sakho.
Iincwadi eziphambili ze-ACT zokuPhatha ze-2016
Iimviwo ze-8 ze-Graders Ngezi ngxaki zeZibhalo zeMathematika
F Major Scale kwiBass
Iindlela zeSifundo seZibhalo zeLDS